KEDU ESI EJIKỌ EKWENTỊ SAMSUNG NA KỌMPUTA? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Kedu esi ejikọ ekwentị Samsung na kọmputa?
Taa, ekwentị mkpanaka bụ ngwá ọrụ kachasị mkpa maka ndụ mmadụ. Igwefoto Samsung na smartphones na-adị n'elu ọkwa ndị a ma ama. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị ọrụ na-ajụ otu ajụjụ ahụ (gụnyere na blog m): "otu esi ejikọ ekwentị Samsung na kọmputa" ...
N'ikwu eziokwu, enwere m ekwentị nke otu ụdị ahụ (ọ bụ ezie na ọ dịlarị oge ochie site na iwu oge a). Isiokwu a ga-ele anya iji jikọọ Samsung ekwentị na PC na ihe ọ ga-enye anyị.
Kedu ihe ga - enye anyị njikọ nke ekwentị ahụ na PC
1. Ikike ichekwa ndabere kọntaktị niile (site na kaadị SIM + site na ebe nchekwa ekwentị).
Ruo ogologo oge, Enwere m ekwentị niile (gụnyere maka ọrụ) - ha nile nọ n'otu ekwentị ahụ. O di nkpa ikwu, gini ga - eme ma oburu na idebe ekwenti ma o bu na o na - agbanyeghi na oge kwesiri? Ya mere, ịkwado bụ ihe mbụ m na-akwado ka i mee mgbe ị jikọọ ekwentị gị na PC.
2. Kọwaa ekwentị na faịlụ kọmputa: egwu, vidiyo, foto, wdg.
3. Melite ekwentị femụwe.
4. Na-edezi kọntaktị ọ bụla, faịlụ, wdg.
Otu esi ejikọ ekwentị Samsung na PC
Iji jikọọ Samsung ekwentị na kọmputa, ịkwesiri:
1. USB cable (na-abịakarị na ekwentị);
2. Usoro Samsung Kies (ị nwere ike ibudata ya na saịtị ọrụ ahụ).
Ịwụnye ihe omume Samsung Kies abụghị ihe dị iche karịa ịwụnye ihe omume ọ bụla. Nanị ihe bụ ịhọrọ koodu ziri ezi (lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
Nhọrọ Codec mgbe ị na-etinye Samsung Kies.
Mgbe e mechara nwụnye, ị nwere ike ịmepụta ụzọ dị mkpirikpi na desktọọpụ gị ozugbo iji malite usoro ahụ ma malite ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ijikọ ekwentị gị na ọdụ ụgbọ USB na kọmputa gị. Usoro Samsung Kies ga-amalite na-akpaghị aka na ekwentị (ọ ga-ewe ihe dịka 10-30 sekọnd).
Kedu ka esi edozi kọntaktị niile site na ekwentị gaa na kọmputa?
Mwepụta usoro Samsung Kies na ọnọdụ Lite - gaa na ndabere data na mpaghara mgbake. Ọzọ, pịa bọtịnụ "họrọ ihe niile" wee gaa "ndabere".
N'ihe dị n'ime sekọnd ole na ole, a ga-edepụta kọntaktị niile. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
N'izugbe, menu dị nnọọ mfe ma dị mfe. Naanị họrọ, dịka ọmụmaatụ, ngalaba "foto" na ị ga-ahụ ozugbo foto niile dị na ekwentị gị. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
Na mmemme ahụ, ịnwere ike ịnyegharị faịlụ, wepụ akụkụ, ntinye akụkụ na kọmputa.
Site n'ụzọ, usoro Samsung Kies na-akpachapụ anya nyocha ngwa ngwa nke ekwentị gị na nyocha maka ụdị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ dị, mgbe ahụ, ọ ga-enye mwelite ya.
Iji hụ ma ọ bụrụ na e nwere ụlọ ọrụ ohuru ọhụrụ - binye njikọ (na menu na aka ekpe, n'elu) na ụdị ekwentị gị. N'okwu m, nke a bụ "GT-C6712".
N'ozuzu, ọ bụrụ na ekwentị ahụ arụ ọrụ nke ọma ma ọ dabara gị - Anaghị m akwado ịrụ arụmọrụ. O kwere omume na ị ga-efunahụ ụfọdụ data ahụ, ekwentị nwere ike ịghọ "dị iche" (Amaghị m - maka mma maọbụ ka njọ). Ma ọ dịkarịa ala - kwadoro n'ihu mmelite dị otú ahụ (lee n'elu na isiokwu).
Nke ahụ bụ maka taa. Enwere m olileanya na ị nwere ike ijikọ ekwentị Samsung gị na PC.
Niile kacha mma ...